Labo ruux oo loo xiray iney u dacwoodeen Nabad diidka Al-Shabaab – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Labo ruux oo loo xiray iney u dacwoodeen Nabad diidka Al-Shabaab
Allhadaaftimo December 17, 2018 Uncategorized
Guddoomiyaha Maxkamada Racfaanka Gobolka Banaadir Garyaqaan Abshir Cumar C/llaahi oo la hadlay Warbaahint Qaranka ayaa sheegay in xabsiga loo taxaabay labo qof oo u dacwooday Al-Shabaab,kuwaasi oo decumenti been abuur ah ay wateen awgeed Maxkamada Gobolka iyo tan racfaanka ay go’aan uga gaareen.
“Afar Qof ayaa loo diray waaran oo intey ka dacwoodeen gobolka laga soo xukumay ka dibna racfaan soo qaatay,Garsoorihii ku qornaa ayaa dacwadda dhageystay oo baaris u diray xeer ilaalinta,waxay soo saartay xeer ilaalintu in decumentigooda uu been abuur yahay, ka bacdi intey carareen ayay u dacwoodeen Al-Shabaab,” ayuu yiri Guddoomiyaha Maxkamada racfaanka Gobolka Banaadir.
Garyaqaan Abshir Cumar C/llaahi ayaa tilmaamay in labo ka mid ah afarta ruux ay maqan yihiin halka labada kale ay xiran yihiin ,kuwaas oo uu sheegay iney argagixisada u aadeen si ay cabsi geliyaan dadka dacwada kala dhaxeysay una handadaan muwaadiniinta kale.
Dhan kale,Guddoomiyaha Maxkamadda Racfaanka Gobolka Banaadir Garyaqaan Abshir Cumar C/llaahi ayaa sheegay in sarkaal ka tirsan Wasaaradda Boostada iyo Isgaarsiinta Xukuumadda Soomaaliya la xiray ka dib markii uu gacantiisa ku sameystay decument been abuur ah,islamarkaana uu isticmaalay.
Garsoorka dalka ayaa horay uga digay dadka Garsoorka u doonta deegaanada ay ku sugan maleeshiyada Al-Shabaa
Previous Qaar Ka Mid ah Xildhibaanadda Golaha Shacabka ee Kasoo Jeeda Konfur Galbeed ayaa ka Digay Doorasho uu ka Maqanyahay Musharraxa Muqtaar Rooboow oo u Xiran Dowladda Soomaaliya.
Next Mukhtar Robow o magacisii lagga masaxay liiska musharaxiinta konfur Galbeed